Tag: MP4 | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 29, 2019 Chipiri, Gunyana 29, 2019 Douglas Karr
Nekuti vatengi vedu vane hunyanzvi hwehunyanzvi, zvinowanzo kutiomera kuti tiwane vanyori vari vaviri vanogadzira pamwe neruzivo Nekufamba kwenguva, takaneta nekunyorazve, sezvakaita vanyori vedu, saka takaedza maitiro matsva. Isu tine maitiro ekugadzira kwatinogadzira inotakurika podcast studio pane nzvimbo - kana isu tinovaisa mukati - uye tinorekodha mashoma ma podcast. Isu zvakare tinorekodha mabvunzurudzo pavhidhiyo.
Taura: Taura uye Batanidza Yako Vhidhiyo Kugadzirwa
Remark inokutendera iwe kukoka vashandisi, kushandira pamwe uye kududzira ako mavhidhiyo. Iwe unogona kushandisa yako iripo vhidhiyo kana yekutambira masevhisi seVimeo, Dropbox, Bhokisi, Youtube. Wese munhu anoshanda kubva kune yakasarudzika, yakasarudzika chinongedzo, ichigonesa iwe kugovana uye kupa mhinduro zvakananga kubva kuchikwata chako kana kumutengi wako pasina kudiwa kweakaundi. Mhinduro inounganidzwa pamwe neiyo vhidhiyo furemu yakatemwa nguva mukamuri yekutarisa. Iwe unogona kutumira kunze manotsi zvakananga mune yako vhidhiyo yekugadzirisa software